रेडक्रसको भ्रष्टाचार का,ण्डमा तानिए गृहमन्त्री बादल …हेर्नुस् !
रेडक्रसको भ्र,ष्टाचार का,ण्डमा तानिए गृहमन्त्री बादल !
काठमाडौं। कल्याणकारी काम गर्ने संस्थाका रुपमा परिचित नेपाल रेडक्रस सोसाइटीभित्र भएको भनिएको भ्र,ष्टाचार का,ण्डमा कम्युनिस्ट गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ तानिएका छन् ।प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा परेको उजुरीका आधारमा छा,नबिनका लागि गृहमन्त्री थापा बोलाइएका छन् ।
रेडक्रस सोसाइटीको नेतृत्वबाट भ्र,ष्टाचार भएको भन्दै समितिमा उ,जुरी परेपछि छा,नबिन प्रा,रम्भ गर्न गृहमन्त्री थापालाई बोलाउने निर्णय संसदीय समितिले गरेको छ । अ,नुसन्धानको सुरूमा गृहमन्त्रीलाई बोलाएर छलफल गर्न लागिएको संसदीय समितिका सदस्य लालबाबु पण्डितले बताए । गृहमन्त्री थापाको कुरा सुनेपछि समितिले आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउने जनाइएको छ ।
संसदीय समितिमा परेको उ,जुरीमा रेडक्रसको नेतृत्वलाई तत्काल ब,र्खास्त गरेर छा,नबिन गर्न मा,ग गरिएको छ । सेवामूलक संस्था रेडक्रस सोसाइटीका अध्यक्षले मासिक १ लाख २५ हजार रुपैयाँसम्म भत्ता लिने गरेको उ,जुरी समितिमा परेको छ । समितिको उजुरीका अनुसार अन्य पदाधिकारीले ३५ हजारदेखि ४० हजार रुपैयाँसम्म भत्ता पाउने गरेका छन् ।
भूकम्पबाट प्रभावित भएका जिल्लामा काम गर्ने रेडक्रसका पदाधिकारीले मासिक ८ देखि १५ हजार रुपैयाँसम्म भत्ता खाने गरेको उजुरीमा उल्लेख छ । रेडक्रस सोसाइटीको वर्तमान नेतृत्वले विधान संशोधन नगराएरै प्रदेश तदर्थ समिति गठन गरेको समेत पाइएको छ ।
गैरसरकारी संस्थाको नियमन गर्नुपर्ने गृहमन्त्रीले उ,जुरीका सम्बन्धमा किन चासो दिएनन् भनेर सांसदहरूले जवाफ माग्ने समिति स्रोतले जनाएको छ ।